ငါးထမင်းနယ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ရှမ်းဆန်.............( ၄) ခွက် (ဆန်ချင်ခွက်)
ငါးရံ. ................၂၀ ကျပ်သား
ခရမ်းချဉ်သီးကို နနွင်းမှုန်. ၊ အရောင်တင်အနည်းငယ်ထည့်ပြုတ်ပြီး..အခွံတွေ
အာလူး ကိုပြုတ်ပြီး..ပါးပါးလှီးထားသလို ၊ ရှမ်းပဲပုတ်ကိုကြွပ်အောင်ကင်ပြီးမှုန်.
တွဲဖက်စားသုံးရန်အတွက် မြေပဲကြော် ၊ ငရုတ်ခြောက်တောင့်ကြော် ၊ ကြက်
နောက်ထပ်တွဲဖက်စားသုံးရန် ၊ နံနံပင် ၊ ဂျူးမြစ် ၊ ဆလတ်ရွက်တွေကိုရေဆေးသန်.စင်ပါ။
အအေးခံထားတဲ့ထမင်းကို ဇလုံကြီးကြီးထဲမှာထည့် ပြီး ၊ ငါးပြုတ် ၊ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် ၊ ပဲပုတ်ထောင်း ၊ အာလူးပြုတ်တွေကို ရောထည့်ကာ ဆား၊
ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်လေးဆမ်းပြီး.မြေပဲကြော် ၊ ငရုတ်ခြောက်တောင့်ကြော် ၊
ဂျူးမြစ် ၊ နံနံပင် ၊ ဆလတ်ရွက်လေးတွေနဲ.တွဲဖက်သုံးဆောင်နိူင်ပါတယ်။